Z4ROOT APK v1.3.0 ( Android Roo Apk ) 7Mb | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Z4ROOT APK v1.3.0 ( Android Roo Apk ) 7Mb
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် root မဖြစ်သေးသူများကိုထပ်မံပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်မှာမိမိဖုန်းအမျိုး
အစားပါရင်တော့ 99% root လုပ်နိုင်ပြောချင်ပါတယ်။မိမိစိတ်ကြိုက် root/unrootလုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာလည်း step by step tutorial လေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းပြထားပါတယ်။
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ Apk လေးကိုကွန်ပြူတာကနေမိမိဖုန်းထဲကိုထည့်ပြီး Install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ Temporary Root and Permanent Root မှမိမိကြိုက်ရာကိုရွေးပြီး root လုပ်လို့ရပါတယ်။လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ Apk
Root လေးပါ။ကွန်ပြူတာမလိုပါဘူး။ပထမဆုံးမိမိဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ important dataတွေကို
root option works on 99% Android devices and below we will sharealist, but you need know this list is created by users, with the compatible devices and incompatible devices for the permanent root option.
အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေကို ရှယ်လိုက်ပါနော်…
This entry was posted in Android Rooting. Bookmark the permalink.
← ✔ Huawei G-520-0000,U8833,U8951, C8813(EMOTION UI),MYANMAR FONT✔
Power ISO v5.8 Crack Serial Keys License Keys Free Download Full Version →